Gaaffii of gaafachuu qabnu!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGaaffii of gaafachuu qabnu!!
1. Oromoon dinagdeen cimee warra kaan waliin dorgomaa ta’uu qaba. Kana gochuuf maal godhuu qabna?
2. Of ittisuu fi nagaa waaraa argatuuf humna cimaa barbaachisa – WBO Kan qabsoorra jiruu fi Kan Mootummaa bira jiruu, humna poolisii Oromiyaa waloon humna addaa nagaa Oromiyaaf gaafatamuummaa qabu ijaaruun filannoo dorgommii hin qabnedha.
3. Hojii sabqunnamtii sagalee fi Dhugaa Oromoo cimsuu- hojii miidiiyaalee mooraa Oromoo akka dantaa Oromoo fi Oromiyaa eegan taasisuu. Miidiiyaa Afaan Oromoo dubbatu bayyachuu qofaa miti dhugaa Oromoo bifa dubbatuu fi kanneen saboota biraa waliin dorgomaa ta’ee qabaachuun rakkoo Oromoo fi eenyummaa sana kanaa kanneen biroo hubachiisuun daddaqama odeessa wal dha’aan dhufu hanqisuun ni danda’ama.